SomaliTalk.com » Afka ha la oon tiro!
Afka ha la oon tiro!
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Friday, December 21, 2012 // 2 Jawaabood
Waxaan doonayaa inaan isweydiinno su’aalo dhawr ah, oo ku saabsan afkeena, af Soomaaligu ma cid gaaraa leh? Mise waa hanti qaranbaa iyo dowladeed? Aqristoow is weydii yaa xil ka saaran yahay Afka Soomaaliga?.
Waxaa kaaga sii daran marka ay joogaan wadamada ay hayaanka iyo barakaca ku tageen ee Galbeedka, waxaa qasab iyo sandulle lagaga dhigaa inay bartaan afka waddanka ay ku nool yihiin, iyadoo qaarkood loogu hanjabo haddey baran waayaaan in lacagta kaalmada ah ee la siiyo laga goosan doono, xilli walba oo uu gooyo barashada afka waddankaas.
In kasta oo ay aad u yar yihiin inta isku hawsha barashada afkeena hodanka ah, dhigmo iyo dhiwaqiisa, dhigaalba, dhaqan iyo hiddaba, suugaan iyo sooyaalba, oo dad badan u arkaan wax aan faa’iido laga gaarayn, balse ah, aragti gaaban iyo aqoon darro uu ka arradan yahay afkiisa.
Haddaan usoo dego ujeedka qormadayda, ayaan doonayaa inaan waxoogaa kaga hadlo shirkan lagu suntay af iyo eray bixin, aysanna ka marnayn in la soo bandhigi doono Qaamuuskii ugu weynaa ee abid ee laga qoro Af Soomaaliga, shirka waxaa lagu casuumay Madaxda Gobollada Shanta ahaa ee Soomaaliya.
Sida ay sheegeen raggii mudada dheer ka shaqaynayay qoritaanka Afka Soomaaliga waxay soo muteen dhibaatooyin iyo wacyi fara badan, oo ay kelliftey kala aragti duwanaanshaha, koox ama nin weliba, ee doorbidayey in la qaato fekerkiisa, waxaa ka mid ahaa markaas farihii la soo bandhigay dhawr farood in la qoray, sida: Farta Cusmaaniya, Kadariya, Gadabiirsiya, laatiin, IKK.
Waraysi uu siiyey Qoraa, Abwaan Xuseen Sh. Axmed “Kadare” oo ka mid ah ragga tirada yar ee hadda ka nool raggii qorey ee hirgeliyey afka Soomaaliga, warbaahinta Soomaaliyeed ayuu ku sheegay in la billaabay qoritaanka Afka Soomaaliga, ka hor xoriyada Dalka Soomaaliya, haddaba, waxa maalinba geeddi la guuro, oo guri la hadhsadoba, gu’gii 1972 dii ayaa la dhaqangaliyey in la qoro Farta Af Soomaaliga, ee ah tan aan maanta qorayo.
Waxaan doonayaa inaan qeexo af iyo inta la xiriirta, ee uusan ka maarmin adeegsi iyo ururinba, umadda aan intaas yeelan waxay qatar u u tahay in afkeedu lumo, maadaama baaritaanno badan lagu soo bandhigay in afaf badan ay dabargo‘ ku sigan yihiin, qaarna horeba u le’deen
Af, Suugaan, Hidde iyo Dhaqan
Dhaqan waa; muuqaal si dhab ah uga turjumaya waxay Qowmiyadi leedahay, ee ay kaga duwan tahay kuwa kale, ee ah; Af, Hidde, Dhaqan, Fal iyo Farsama, ee ku umaddi wadaagto, iskagana raalli tahay midna dadka adduunka la wadaagto midna keligeed leedahay, mid hore u jirey iyo mid la unkayo ama la unki doono Xaajo ugub ama curad waa mid uun. Mid isbedesha oo laga guuro iyo mid soo kororta oo loo guuro. Dhaqankuse qaybaha nolosha ayuu galaa, gebi ahaanteed, oo ku dhisan hadday Qof Qoys ama Qaran noqon lahayd.
Dhaqanka Soomaaliyeed, marka la xuso, qofba meel ayaa u muuqata, qofbaa waxaa u muuqda Hugii iyo hannaankii dhar xidhashadii. Qof kalana waxaa u muuqanaysa oo uu xasuusanayaa, xishoodkii iyo hamrashadii gacalka iyo walaalaha. Mid kale ayaa waxaa u muuqanaysa, hiddihii iyo suugaantii. Mid kale ayaa waxaa u muuqanaya, Saanaddii hubka, Farsamadii iyo hawl nololeed, sida xoola dhaqashada reer guuraanimada, beerallayda iyo xeerarkii geedka looga dhaqmi jiray. Midbaa soo xasuusanaya, Dabshidkii, Xidigintii IQB. Dhaqanka Soomaaliyeed maaha mid qalin qof iyo buug midna koobi karayo, balse, isku soo doo wada duube, waa dhaqan umadi gaar u leedahay oo asal iyo astaan u ah.
Afku waa kan wax weliba ku jiraan, waa dhawaqa Carrabka iyo Dhuunta ka soo baxa ee ka soo fula dareenka maskaxda, ee aynu u isticmaalno erayeynta nolol maalmeedka, isu tagga erayo dhawr ah ayaa noqda weedh, oo dhawaqiisa markaad maqasho kuu samaynaya macnaha iyo ujeedka aad garan doonto waxa uu yahay, Af waa wax umad u gaar ah oo ay u adeegsato heerarkeeda nololeed, waxaynu ku salaynaynaa Afku waa dhawaq ay isku fahmaan bulsho weliba oo isku dad iyo deegaan wadaagta ama ku mideysan afkaas ay ku hadlayaan afku waa hadal, Hadalkiina waa midka u sii kala baxaya; Hawraar, Hal-abuur, Hasaawe, ama Tix iyo Tiraab, hadalkaa umadeed ma jiro qof gooni u leh, ma jiro eray ka mid ah qof diidi kara adeegsigiisa, waa hanti la wada leeyahay, dadkana waxaa loogu jecelyahay, kan dhawra ee dhaqaaleeya, ee isku hawla, dayaca iyo darxumadana ka jira.
Waxaa dhacday inaan la sheekeystay, rag asxaabtayda ah oo kal kala yimid waddamo kala duwan, sida: Kameroon, Everycaosta iyo waddamo kale oo Afrikaan ah, oo dhammaantood ku hadlaya Afka Fransiiska, maalin maalmaha ka mid ayaan weydiiyey maxaa la yidhaahdaa Afkiina hooyo magaciis? Wuxuu mid weliba iigu jawaabay afkayga hooyo waa Fransiis! Waxaan is idhi ismaydaan fahmin, waan ku celiyey, wuxuuna iguu jawaab celiyeen waa Faransiis, markaasaan weydiiyey, 1884 ka hor, intaanu cadowgii gumaysigu iman Afrika maxaad ku hadli jirteen? Waxay iigu jawaabeen, waxaanu lahayn, luuqado kala duwan, oo markaad 50 Km socotaba aad gelayso luuqad kale oo aan tii kale meel ka shaabihin, wuxuu markaa nin weliba ku qasbanaa inuu barto inta jiiraan la ah, luuqadahooda si ay isu fahmaan oo ay u kala adeegtaan, waxay yidhaahdeen, luuqaddan Fransiiska ayaa waxii oo dhan meesha ka saartay, waxaanu leenahay hadda hal Af oo la yidhaahdo Fransiis.
Waxaay i weyiideen maxaad ku hadashaa adigu? Waxaan idhi waxaan leyaahay luuqad la yidhaahdo Soomaali oo qoran oo caalami ah, dad intaas xaddi le egna ku hadlaan, kadib ayay iigu jawaabeen, Awooyaashaa ayaa kuu hiilliyey, oo la dagaallamay Gumaysiga, balse, haddii aydaan Talyaani, Ingiriis iyo Fransiis, iska celin lahayn, luuqaddiisu way lumi lahayd, waxaanad ku hadli lahayd af nin Yurubiyaan ahi leeyahay sida anaga oo kale, maalintaas waxaa halkaas iiga baxay inaan haysto wax aan dheerahay qayrkay oo ah, Af, Hidde iyo dhaqan ii gaar ah, oo aan cidina ila wadaagin, waa wax lagu faano, inkastoo dad badan oo Soomaaliya oo aqoonyahanno isku sheega u maleeyaan ilbaxnimo luuqadaha ajaanibka ama afafka qalaad.
Qoraalku waa dhigaal afeed u gooniya afka lagu qorayo, isagoo la wadaagi kara xarfaha ama shaqallada qoraallo kale, oo laga adeegsado adduunka, ayey haddana, ku kala duwanaan yihiin; dhisme, dhigaal iyo dhawaq intaba. Sida maanta keenna oo ka mid qoraallada lagu qorey (Latin) haddana, qof walba oo dhigaalka Laatiinka yaqaan ayaa awood u lahayn inuu fahmo afkeena, lagase yaabe inuu kicin karo ama ku dhawaaqi karo, hadduu isku dayo inuu aqriyo, inta uu ka oggaanayo isbedelka xarfaha laatiinka ee ay luuqadaha ku qorani adeegsadaan, waa halkuu ka yidhi
Abwaan Cabdule Raage Taraawiil.
Waxaan ka wada dhereg sannahay, umadda Soomaaliyeed ayaa nin weliba wuxuu isu yaqaana keligii Soomaali, oo gobol walba haddaad tagto ama la sheekaysato bulshada ka timid waxay isku sheegayaan inay yihiin; dadka ama gobolka ugu faraca wanaagsan ee ku hadla af Soomaaliga ugu quruxda badan uguna hoddansan, anigu anigoo dhalinyaro ah, ayaan waxaan tegay 11 Gobol oo dalka ah, oo ku kala yaalla, Waqooyi, Bartamaha, Koonfurta dhaw, iyo Galbeedka. Intii u dhaxaysay, 1988-1998 Waxaana nasiibku ii saamaxay inaan wax ka oggaado, kala duwanaanshaha, Farac afeedka ama laamaha afkeena, ma jiro, farqi weyn oo u dhaxeeya marka laga reebo qaab odhaaheedka carrabka oo kala yara geddisan, balse, erayga Soomaaliga ahi ma kala gedisnaa karaa, Tusaale ahaan: “Waa Cadhaysanahay, Waa caraysanahay, waa caraysnahay, balse, waxaa jirta inay dhammaan gobollada Soomaaliyeed, dhinacyada Suugaanta, ciyaaraha, heesaha xoolaha, qaab nololeedka reer guuraaga iyo beeralayda iskaga mid yihiin.
Gobollada: Barriga, Nugaal iyo Barri, qayb Sanaag ah iyo Qayb Sool ah
Gobolka: Banaadir. Dhammaan Afguriyadaa oo dhan ayaa looga hadlaa iyo Af Magaalada dadkeeda u gaar ahna waa jiraa.
“Xalaal iyo xoog suu ku xero galo midna kuma xuma“
Iyadoo la isla fahmayo dhammaan ujeedka erayadan, ayaa haddana, jirin mid ah kii la isku raacay ee qoraal ahaaneed ama sida gaarka ah loo xushay, halkaas waxaa ka soo baxaa inuusan jirin, qoraal la isku raacsan yahay, balse, uu jiro keliya qoraal Soomaali ah oo nin weliba u xor yahay sida uu wax ugu qoranayo.
Waxaan aamin sanahay in la gaadhay waqtigii ay Soomaalidu ku midoobi lahayd Guddi loo saaro oo baadhitaan qota dheer ku sameeya, is waafajinta afka, dhaqanka iyo dhigaalkaba, iyagoo dhinacna u burinayn. Tusaale ninbaa waxaa lagu ammaanayaa hebel nin ka af soomaali badani ma jiro, haddii uu u yimaado nin reer baydhabood ah, ama wallaweyn ama Kuntuwaarrey ka yimidna Af gurigiisa ma yaqaan, deegaan weliba wuxuu leeyahay, ciyaaro, heeso, suugaan, way yartahay dadka inta taqaana, dhammaan deegaamada dalka oo dhan, marka qolo walba iyo gobol walba dadkooda suugaanta, iyo afka iyo dhaqanka iyo taariikhda ku xeeldheer ha la xulo, hana la wada maro, deegaamada Soomaaliya, ilaa Herer ilaa Jabuuti Gaarisa ilaa iyo Ceelaayo waa iney cagta dhigaan, gobol walba waxaa laga helayaa
Waxaa kale oo aan kula talin lahaa Guddiyadaas haddiiba la magacaabo, iney u daneeyaan dhalinta waxbaranaysa, kuwa qurbaha ku dhashay iyo cid walba oo u baahan, oo Qaamuuska la qoro waa in la geliyaa, aaladaha casriga ah, ee is turjubaana “Universal translator” Google Translator” oo ka caawin doona qofka inuu helo ama barto si sahlan kelmadaha ku adkaada ama qaab qoraaleedka saxan ee afkiisa.
Suugaanyahanka Soomaaliyeed, iyo Qoraaga Soomaaliyeed waa kaydka iyo marjaca Af Soomaaliga waxaanan ku boggaadinayaa dhammaan bahda Suugaanleeyda ah inay ilaaliyeen, oo dhawreen hanti qaran iyo Qowmiyadeed, qalinlleeydana intii wax qortey iyo kuwa hadda qori doona waan ku dhiirrigelinayaa, waxaanse u sheegayaa afka maaha tuulada aad degan tahay iyo tan kuu dhaw iyo inta reerkiinu ku hadlaan ee waa umadda Soomaaliyeed oo dhan.
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: afsoomaali
2 Jawaabood " Afka ha la oon tiro! "
Monday, December 31, 2012 at 8:28 am
ugu horayn waad mahadsantahay aad ayaan ula dhacay qoraalkaaga marar badan isku day inaad soo diyaariso qoraalo noocan oo kala ah si qoraal kaagu u noqdo mid aad u wanaagsan oo soo jiidasho badan
Tuesday, December 25, 2012 at 8:09 pm
Asc. Walaalka soo diyaariyey qoraalkani aadbuu ugu mahadsan yahay Allahna haka
ababaal mariyo. Inkastoo luuqadaha kala duwan ay tahay calaamo Rabaani ah , haddana waxaan dareemi karaa baahi badan oo luuqadda afsoomaaliga loo qabo ay jirto, gaar ahaan qoraalada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa wanaagsanaan lahayd haddii la heli lahaay walaalo soo diyaariya casharro kooban oo ku saabsan barashada qoraalka afsoomaaliga si looga wada faa”iidaysto Somalitalk ay u noqoto meel marjac ay dadka u laabtaan.